Zụta ma Ree Onyinye Kaadị n'Onlinentanet! | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 26, 2006 Tọzdee, Disemba 26, 2006 Douglas Karr
Naanị oge maka ezumike. You maara na 10% nke kaadị onyinye niile anaghị agbapụta? Nke ahụ bụ ego efu maka ndị na-ere ahịa.
Enwere kaadị onyinye ị na-agaghị eji? Ree ya na Mgbanwe!
Tupu ị gawa ịzụ ndị enyi gị niile, ndị ezinụlọ gị na ndị ọrụ ibe gị, ị ga-azụrịrị ha na MgbanweA na ego!
Ọ dị mma, ya na nkezi ego bụ 12% mgbe ịzụrụ ya, gịnị ma ị zụta kaadị onyinye na ntanetị ma soro gị zụọ ahịa mgbe niile?
Achọpụtara m taa ma enwere m ike ịzụta Kaadị $ 40 Starbucks maka $ 35 !!! Nke ahụ bụ Mocha n'efu!
Mara: Swapagift.com na-egosipụta nguzozi na kaadị onyinye tupu akwụ ụgwọ ndị ahụ. Lee nnukwu echiche!
2007 Biko weta ndị editọ ọhụrụ
Dec 26, 2006 na 2:16 PM
Achọtara m onye ọzọ:
Mar 10, 2007 na 5: 42 PM
Nhọrọ Swapagift.com dị mma. Azụrụ m ọtụtụ kaadị, ha na-enwekarị ọkwalite na ire ahịa. Naanị zụtara kaadị nzuzo nke victoria maka ihe dịka 20% kwụsịrị na enweghị ebubo ebubo.